समुद्र तट मा sam |
पाँच रील र 243 paylines स्लट, समुद्र तट मा sam विद्युत sam हाम्रो मनपर्ने ट्रोल आधारित छ. यो समय त्यो क्यारेबियन एक छुट्टी मा आफ्नो परिवार संग छ. समुद्र तट मा मजा outing तिनीहरूलाई सामेल. यो रमाइलो खेल मा प्ले गर्न उपलब्ध छ बेलायत सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो.
एल्क स्टूडियो वरिपरि देखि गरिएको छ 2012 र उल्लेखनीय क्यासिनो सफ्टवेयर विकासकर्ता रूपमा माथि आएको छ. धेरै खेल संचालक लागि कम्पनी आपूर्ति खेल. यो स्लट तिनीहरूलाई विकास छ र मा प्ले गर्न सकिँदैन बेलायत सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो.
यो स्लट आधारभूत पाँच रील हुन सक्छ तर कुल छन् 243 तपाईं बाजी थाप्न र जित्न सक्छौं जसमा तरिका. खेलको नेत्रहीन आकर्षक पृष्ठभूमि समुद्र तट को सिद्ध दृश्य देखाउँछ. को रील मा प्रतीक सबै द्वारा मा प्ले गर्न सक्ने खेल मा विषय अनुसार छन् बेलायत सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो. कम-मूल्य प्रतीक नियन रंग केकडे छन्, तारे माछा, र seahorses. उच्च-मूल्य प्रतीक शमू पत्नी समावेश जो Sandra को ट्रोल र तिनको परिवार छन्, आफ्नो भाइ, टेड, र आफ्नो छोरी Maggie.
यो विभिन्न सुविधाहरू बेलायत सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो स्लट छन्:
फ्री Spins- को स्क्याटर घंटी प्रतिमा छ र जब यी छरिन्छ तीन वा बढि reels.You मा जमीन प्राप्त हुनेछ यो सुविधा ट्रिगर 5, 10, वा 15 अवतरण लागि निःशुल्क spins 3, 4, वा5छरिन्छ.
समुद्र तट सम्झना Respin- तपाईंले सबै परिवारका सदस्यहरूको एक तेर्सो रेखा संयोजन हुँदा त यो सुविधा सुरु गरिनेछ. तपाईं संग एक respin प्राप्त4टाँसिएको wilds.
बिजुली व्यवहार- यस फ्री Spins राउन्ड समयमा यो सुविधा जीवित छ र सबै चार परिवारका सदस्यहरूले यो भूमिका खेल्न. हिट3निःशुल्क spins वा थप शमू प्रतीक र त्यो त टाँसिएको जंगली हुन्छ जो अनियमित प्रतिमा electrifies. हिट3थप Sandra प्रतीक र त्यो 10x गुणक सम्म दिन्छ वा3Maggie प्रतीक र त्यो सबै तल्लो मूल्य प्रतीक गरेर आफ्नो विजेता संभावना बढाउँछ को रील देखि गायब. हिट3टेड प्रतीक र उहाँले तपाईं एक टाँसिएको गुणक दिन्छ.
यो रमाइलो छ, तपाईं खेलमा रुचि राख्न सुविधाहरू प्रशस्त संग रमाइलो खेल. यो बेलायत सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो खेल तपाईं सम्म जीत गर्न अनुमति दिन्छ 2,275 पटक आफ्नो wager.